Golaha Wasiirada oo maalinta berri yeelanaya shir aan caadi aheyn - Home somali news leader
Home NEWS Golaha Wasiirada oo maalinta berri yeelanaya shir aan caadi aheyn
Golaha Wasiirada oo maalinta berri yeelanaya shir aan caadi aheyn
Golaha Wasiirada Xukuumadda Soomaaliya ayaa maalinta berri oo Sabti ah yeelanaya shir aan caadi aheyn, kaasoo aan si rasmi ah loo shaacin ajandaha looga hadlayo.
Shirkan oo baaqday Khamiistii, ayaa Wasiirada farriin qoraaleed loogu sheegay baaqashada kulanka iyo in Sabtida uu dhici doono, inkastoo aan wax ajande ah loo sheegin.
Hadal heyn kala duwan ayaa soo baxaya, kaasoo sheegaya in shirka berri ee Golaha Wasiirada laga soo saari doono go’aano culus oo ka dhan ah Jubbaland oo lagu saleyn doono xaalada doorashada oo weli lagu muransan yahay Guddiyadii uu soo magacaabay Ra’iisul Wasaare Rooble.
Wasiir ka tirsan Xukuumadda oo diiday magaciisa ayaa u sheegay Wariyaha Jowhar.com in maalmaha soo socda Xukuumadda qaadi doonto tallaabooyin ka dhan ah Maamulka Jubbaland.
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur ayaa farriin uu soo dhigay bartiisa habeen hore waxaa uu ku shaaciyay in Xukuumadda ay qorsheyneyso inay Jubbaland ku tilmaamto deegaan cadaw heysto, waxaana uu ku tilmaamay in haddii arrintaas dhacdo ay tahay go’aan qar iska-tuurnimo iyo daldalaad siyaasadeed.
Illaa iyo hadda lama oga nooca uu noqon doono go’aanka iyo tallaabada ay qaadi doonto Xukuumadda, inkastoo maalmo ka hor Warqad ka soo baxday wasaaradda Arrimaha dibadda Soomaaliya ay ugu yeeratay Safiirkeeda, isla markaana Safiirkii Kenya u joogay Soomaaliya ku wargelisay inuu dalkiisa dib ugu laabto.
Dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay Kenya inay cadaadis ku saareyso Maamulka Jubbaland inuu carqaladeeyo heshiiskii siyaasadeed ee doorashada, sidaas darteed ay Kenya faragelin bareer ah ku heyso arrimaha gudaha Soomaaliya.
Previous articleNapoli Stadium was renamed after Maradona to honor their football legend
Next article“We are not Hungary, Turkey or anyone like that”: Macron rejects “illiberal” accusations